January 2, 2018 – Bachan Tv
दिपेश एक युवा हुन । एक जना किसानको छोरीको गहिरो प्रेममा डुबेका हुन्छन् । जसरी भएपछि छोरी माग्न जान्छन् । किसान आफै खेतबारीमा व्यस्त थिए ।
विभिन्न कुराकानी बल्ल उनका छोरी माग्न आएको कुरा बताउँछन् । किसान मुस्कृुराउँदै भन्छन्, “ प्रिय छोरा उता गएर उभिए, म ३ बाट गोरु पालैपालो छोड्छु, तिमीले त्यस गोरुहरुको पुच्छर समात्यौं भने म मेरो छोरी तिमीलाई दिन्छु ।”
पूरा बलका साथमा दिपेश तयार हुन्छन् । उहाँसँग जोस, जाँगर, हिम्मत, बलसँग तयार हुन्छ । उताबाट किसानले पहिलो गोरु छोड्छ । बलियो गोरु थियो । उसले सोच्दछ, “ भो… यो बलियो रहेछ । अर्कोलाई समात्छु भनेर उसले निर्णय गर्दछ । त्यो गोरु उसको छेउबाट जान्छ ।
फेरी अर्को गोरु दोस्रो ढोकाबाट निस्कन्छ । अचम्म…. अविश्वनिय… दुर्लभ… कहिले नदेखेको गोरु हुन्छ । सायद यो असम्भव नै छ । उसले भन्दछ, “यसमा बल लगाउनु भन्दा त अन्तिम आउने लगाउँदा ठिक छ ।” त्यो दोस्रो गोरु पनि उसकै अगाडिबाट जान्छ ।
तेस्रो ढोका खुल्दछ । उसको अनुहारमा उज्यालोसहितको मुस्कान छर्दछ । अचम्म…. अविश्वनिय… दुर्लभ… कहिले नदेखेको तेस्रो गोरु उसको अगाडि हुन्छ । कति नै कमजोर, दुब्लो र हिड्ने मुश्किल…. विस्तारै विस्तारै गोरु अघि वढ्छ ।
उ पूरा तयारीको साथ अघि वढछ् । पूरा बलको साथ बुरुक उफ्रेर… हात पुच्छर समाउन खोज्दछ .. अवसोच त्यस गोरुको पुच्छरै हुँदैन ।
– संकलन ः रामहरी थापा
सक्दो शेयर गरौं… लाखौं जनतासमक्ष पुगाऔं ।
येशूलाई पछ्याउने मान्छे म होइन… सोच्ने गर्थे – रेभ मंगलमान महर्जनको एक जिउँदो गवाही
Posted on January 2, 2018 January 3, 2018 by BACHAN TV
अठारौँ शताब्दीको आरम्भतिर नेपाली भूमिमा पहिलो ख्रीष्टियान मिसन स्थापित भएपछि मैले थाहा पाएसम्म उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा ख्रीष्टियान कार्यक्रम भएको यो पहिलो हो । आज राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ, नेपालद्वारा आयोजित विशेष शुभ-कामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्माननीय उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न भयो । सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनको प्रमुख आतिथ्यमा सञ्चाालित कार्यक्रम अद्वितीय थियो ।
नेपाल ख्रीष्टियान इतिहासमा यस्तो समय पनि थियो जुन बेला बाइबल बोक्न मनाही थियो र सुसमाचार प्रचार गरेकाले जेल हालिन्थ्यो । तर आज इतिहास उल्टिएको छ । बाइबलले कुनै ख्रीष्टियानको घरमा मात्र नभई सम्माननीय उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा समेत हार्दिक निमन्त्रणा पाएको छ । येशू अब मण्डलीमा मात्र होइन, तर राजनीतिक कोठाहरूमा प्रचारिनुभएको छ ।
बाइबलमा परमेश्वरका जनहरू विभिन्न माध्यमद्वारा दरबार पुगेका उदाहरणहरू मनग्गे छन् । कैदी जीवन बिताइरहेका योसेफ मिश्रको साम्राज्यमा दोस्रो शक्तिशाली व्यक्तिमा पदोन्नति भए । आफ्नो मातृभूमिबाट निर्वासित गरिएर लगिएका दानिएल बेबिलोनका प्रधानमन्त्री बने । सामान्य यहूदी स्त्री एस्तर फारसकी महारानी बनिन् ।
आज १ जनवरी २०१८। यस सम्बतलाई इस्वी वा इसा वा येशू सम्बत भनिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा यो सम्बत येशू ख्रीष्टको यस पृथ्वीमा भएको आगमन पछि शुरू भएको सम्बत हो । विश्व इतिहासलाई सम्बोधन गर्दा बिसी र एडी भनिन्छ । बिसी भनेको बिफोर क्राइष्ट वा ख्रीष्टभन्दा पहिलेको समय र एडि भनेको एनो डोमिनी वा परमप्रभुको वर्ष वा येशू आउनु भएपछिको समय भन्ने बुझिन्छ । यी दुवै शब्दहरू येशूं ख्रीष्टसँग सम्बन्धित छन् । आज मानिसहरू यो सम्बतलाई प्रयोग गर्छन् र यसको खुशीयाली मनाउँछन् तर जसको नाउँमा यो शुरू भएको हो उहाँलाई उच्चारण गर्न पनि चाहँदैनन् । यो कस्तो दुःखदायी कुरा । यही समाचारमा पनि विश्वभर अंग्रेजी नयाँ वर्षको स्वागत भनेर गल्ती सन्देश प्रवाह गरिएको छ । आजको १ जनवरी २०१८ अंग्रेजी सम्बत नभएर यो इस्वी वा येशू सम्बत हो । कृपया सही समाचार संप्रेषण गर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामी इतिहासको तथ्यलाई नमारौँ । त्यो अन्याय हुन्छ । इस्वी वा येशू सम्बत २०१८ को शुभकामना दिन चाहन्छु । जीवित परमेश्वरले तपाईंहरु सबैलाई शान्ति समृद्धि प्रेम क्षमा र मिलापको जीवन दिनुभएको होस् ।